Divination amin'ny lehilahy
Voalaza fa raha misy vehivavy misalasala ny fihetseham-pon'ny namany, dia tena tia azy tokoa izy. Noho izany dia mitebiteby mafy amin'ny fisalasalana izany, nefa fotoana fohy monja no mieritreritra fa ny havan-tiana iray dia afaka mieritreritra vehivavy iray hafa. Izany no mahatonga ny olona hanana teboka maro be ho an'ny lehilahy iray - olon-tiana iray, fahavalo, namana, vahiny ... Raha ny marina, tsy lehilahy izany, fa vehivavy iray izay mitazona ny fofon'aina ary mila mahafantatra ny zava-drehetra sy ny rivotra rehetra manodidina ny tranony.
Saingy mbola ny filazana ny fahatsapan'ny olona tiana iray izay mipaka amin'ny toerana voalohany eo amin'ireo karazam-bozaka malaza hafa rehetra.
Miangavy fatratra kely amin'ny tombony momba ny olona iray manokana sy ny fomba hijerena ny ho avy miaraka amin'ny karaoty mahazatra.
Amin'ny karatra tsotra
Ity lazaina ho lazaina ity dia antsoina hoe "Poloney", ilaina ny mino noho ny fiaviany. Ny maha-zava-dehibe an'io harena io milaza ny fitiavan'ny olona iray dia ny mamaritra ny mety ho fofom-bady.
Maka karazana karajia 36 izahay, avy eo dia misafidy karatra "ny anao", ny sarinao. Raha zazavavy ianao - ramatoa ramatoa, raha toa ianao ka 30 - chervovuyu, 40 - cross, ho an'ny tampon'ilay vehivavy 50 - lady. Avy eo, misafidy ireo karatra "numeric" - hatramin'ny fito ka hatramin'ny folo. Hanome fanoritsoritana ny mety ho olona tiany izy ireo.
Noho izany, manana karatra 17 isika. Manapaka azy ireo isika ary manely azy mivantana.
Ny karatra manaraka aorian'ny "anao" - ity no fofom-bady (raha nametraka ny farany ny vehivavy, ny tapaka - ilay nianjera teo alohany). Omeo laza izy izao.
7 kankana - olona mahay mandanjalanja sy mahaleotena, afaka manamaivana ny fihenjanana amin'ny fifandraisana amin'ny fanampiana ny fahatsapana vazivazy.
Ny ampongabendanitra 7 - kiram-borona sy kivy. Manova ny vehivavy ho toy ny fonon-tanana, fihetsika voalohany izy, avy eo mieritreritra momba ny tonga lafatra.
Ny klioba 7 - olona manokan-tena. Ny fifandraisana aminao dia hahaliana azy raha tsy miharihary ny tombontsoa manokana.
7 mianjera dia mpihazakazaka mahomby. Ny fitiavana dia tia ny tenany ary hametraka mihoatra noho ny fiononam-po sy fahafaham-pon'ny tsirairay manokana, eny fa na dia ao anatin'ny fiainana lalina aza.
Ny kankana 8 dia olona mirehareha. Aza manala baraka azy mihitsy, tsy hamela sy hanadino izany izy, hanome anao izay rehetra tianao izy raha afaka maneho faharetana sy mialoha ianao.
8 diamonds - mivantana, tsotra, mivantana mivantana. Aza manafintohina raha toa ka mangidy loatra ny fahamarinany.
Ny klioba 8 - ny fanantenana, na dia eo aza ny zava-drehetra eo amin'ny fiainana dia sarotra be aminy.
Teboka 8 - maro no hahita izany. Too erudite, mahay mamaky teny, mahira-tsaina - raha mitady fikirizana ianao, dia izy no ilainao.
9 kankana - ao anaty fandriam-bolo sy malefaka, ivelan'ny - sociable ary ny fanahin'ny orinasa. Te-hiseho ho maneso tampoka izy, kanefa tsy hamela na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana.
Fikambanana 9 - olo-malaza, mahay mandanjalanja ary mpandraharaha. Tsy ho liana fotsiny ianao raha manana toetra mitovy.
9 peak - ny mahafantatra fa mety hampidi-doza ity olona ity. Tsy ho tianao izany amin'ny voalohany, fa hanao ny zava-drehetra mba hiantohana fa miaraka aminy ianao. Ary raha ny marina, ny raharaha dia mety hahatratra ny mazia sy ny heloka bevava.
Kankana 10 - lehilahy malefaka sy malefaka ary malefaka. Ny fiantraikany eo amin'ny fiainana dia fianakaviana matanjaka.
10 ampongabendanitra - kisary bitika kely, fa fotsiny satria izy dia tena workaholic. Olona mahery sy miasa mafy no hanokana anao ny herin'ny fiainany sy ny vola rehetra azony, raha mampiaiky azy amin'ny fahatsoranao.
Fikambanana 10 - fanandramana iray, toy ny risika sy ny planina "Napoleonic". Ny hafaliany dia ny fanatanterahany ny fampanantenany tsy misy fanavahana.
10 mianjera - ny tena zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ity lehilahy ity - izy tenany mihitsy. Ny lehilahy toy izany dia tsy hikarakara anao, fa ny mifanohitra amin'izay, heveriny fa tsy maintsy hikarakara azy ianao, satria efa nahasambatra anao tamin'ny orinasany izy.
Divination amin'ny fitiavana
Ity sikidy manaraka ity dia hanampy anao hijery ny fihetsiky ny olon-tianao aminao. Ny tanjon'ity rakotra ity dia ny hanome anao ny fahafahana hahita ny zava-drehetra amin'ny fomba mazava tsara tsy misy fanavakavahana, fihetseham-po ary "solomaso raozy".
Ho an'ny fanaovana sikidy, mila karatra misy karatra 36 ianao. Tokony hokarohina tsara izy ireo, ary, hitazona eo ankavia, ankavanana, hitifitra araka ny algorithm manaraka:
karatra telo eo afovoan'ny latabatra;
Karta telo mifehy ny laharana afovoany;
Karatra telo miorina eo ambanin'ny laharana afovoany;
Karatra telo eo ankavanana sy ankavia amin'ny laharana foibe.
Ho an'ny fampisehoana sy ny fandikana dia jereo etsy ambany.
Ny endriky ny karatra dia maneho ireto manaraka ireto:
ny laharana afovoany dia izay efa ao am-ponao izao;
serivisy ambony ambony - ny ho avy;
fihodinana ambany ambany - ny lasa;
Roa roa eo anilany - ankehitriny.
Ary ny sandan'ny karatra dia toy izao manaraka izao:
Ny akanjo somary dia midika hoe fitia, tafiotra, alina, firaisana.
Ace - alina, miaraka amin'ny mpanjaka manondro ambony - fitiavana be fitiavana amin'ny vehivavy iray. Raha misy vehivavy sy mpivady eo akaikinao, dia hisy fientanam-po mahery vaika na fanamafisam-peo ny fifandraisana.
Ny mpanjaka miaraka amin'ireo folo dia ny fampakaram-bady.
Ny ampolony dia midika foana ny fahalianana, miaraka amin'ny alika sy mpanjaka iray - tombontsoa manokana.
Ny 9 no manirery.
Valo dia aretina.
Fito - ranomaso.
Fiainana enina alina, angamba mandeha amin'ny daty.
Ny akanjo fanosorana dia midika hoe fivoriana am-pitiavana, faniriana ny ho tia sy ho tia, lohataona, maraina.
Ace - trano, vahiny, antoko, izay mety, ary hisy ny fivoriana.
Ny mpanjaka dia olona afaka. Bachelor.
Vehivavy maimaim-poana sy tsy manambady ilay ramatoa.
Mianjà - ny olana amin'ny mpanjaka kankana.
Folo - fitiavam-pitiavana, mivory ao an-tranonao na any amin'ny toerana hafa ao an-tanàna.
Ny tena marina dia ny fitiavana.
Valo - fisarahana amin'ny malalany.
Fito - nofinofy, nofinofy, famitahana.
Enina ny lalana maraina.
Ny teny crossword dia manondro ny famoronana, lavitra ny fitiavana. Ny krizy dia fiaraha-monina, hariva, fararano.
Ace dia trano, fararano, hariva.
Ny mpanjaka dia lehilahy matanjaka, be taona, azo antoka ary mpanankarena. Ny lanjan'ny tsy miankina amin'ny karatra dia fandrosoana goavana.
Ny vehivavy dia vehivavy efa lehibe taona, mahery ary manan-karena.
Jack - fisarahana, izay miteraka fahakiviana sy fisainana mampalahelo.
Zava-olana ara-barotra, olana amin'ny Mpanjakan'ny Hazofijaliana.
9 - famadihana na sakana.
Valo - ranomaso, alahelo.
Fito - talk, meeting.
Enina dia lalana eny an-dalana, fivarotana raharaham-barotra.
Diamonds - vola, fanambinana, andro, maraina.
Ace - vola, vintana, harena, fihaonana amin'ny malalanao.
Ny mpanjaka dia manambady fa tsy olona afaka.
Vehivavy manambady ilay ramatoa.
Mianjà - ny olana momba ny vola, ny eritreritry ny mpanjaka diamondra.
Folo - tombontsoa, ​​tanàna, vintana amin'ny vola.
Ny 9 no harena, vintana.
Valo - ny fahaverezan'ny fahaiza-manao.
Fito isam-barotra ny fito.
Enina - ny lalana ho an'ny vola, fivarotana asa.
Divination amin'ny Tarot amin'ny toe-javatra
Fortune-milaza ny karatra ho an'ny anjara
"Tiany ve izy?", Hoy izy
Tarot Manara - ny dikan'ny karatra, ahoana no ahafantarana an'i Tarot Manara?
Fampisehoana Taratra ho an'ny Bevohoka
"Freestyle" an'ny sikidy ho an'ny ho avy - fomba 5
Divination amin'ny isa 1 hatramin'ny 100
Divination amin'ny alin'ny Krismasy ho an'ny fanambadiana
Manasonia ny Mpamonjy ny Tompo amin'ny fotoana rehetra
Ny fitomboan'ny zaza mitombo
Capelin manondraka ny tongolobe ao anaty vilany
Ahoana no hankalaza ny fitsingerenan'ny andro ririnina amin'ny ririnina?
Fampijaliana aorian'ny fahafatesana
Ny tsirony ao am-bava - ny antony
Andro iraisam-pirenena momba ny fandeferana
Fikarakarana ny fitsaboana ny voary
Ny fototry ny alika dia nitsangana - fampiharana
Rhodes na Kreta - iza no tsara kokoa?
Inona no mitranga raha mafana ianao Mantoux?
Azo atao ve ny mihinana sakafo fandevenana isan'andro?
Ahoana ny hanasana lamandy?
Conjunctivitis - fitsaboana, fery
Lasopy kohaka ho an'ny fatiantoka